रूममा कस्सले बनाउँछ चरेस ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार रूममा कस्सले बनाउँछ चरेस ?
रूममा कस्सले बनाउँछ चरेस ?
जिल्लाको मालिका गाउँपालिका २ रूममा केहीबर्ष अगाडी बुटवल तर्फ लैजाने तयारीमा २३ केजी ५० ग्राम चरेस सहित प्रहरीले दरवाङबाट तीन महिलालाई पक्राउ गरेको थियो । अत्याधिक माग रहेको चरेसबाट विना लगानी राम्रो आम्दानी हुने भन्दै तीनजना महिलाले विभिन्न ब्यक्तिको सम्पर्कमा पुगेर चरेस पठाउन लागेको अवस्थामा सुराकीको आधारमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । जिल्लाकै इतिहासमा ठुलो परिणाममा रुमबाट चरेस बाहिरिएपछि प्रहरीले समेत लगातार त्यस क्षेत्रमा निगरानी गर्ने गरेको छ ।
गाँजा र चरेसको लुकिछिपी केही ब्यक्तिले विक्री गर्ने गरेको प्रहरीको अनुमानलाई गत जेठको अन्तिम साता रुमकै रुमका ३९ बर्षिय नोक बहादुर रोकाको घर खान तलासी गर्दा घरको उत्तर तर्फ पालीको कुना लुकाइराखेको अवस्थामा ९२० ग्राम बराबरको कालो रङको चसेर फेला परेपछि प्रहरी झस्किएको छ । सानो परिणाममा गाँजा भेटिने गरेको अवस्थामा दुर्गम रुमबाटै करिव १ केजी ब्यापारिक प्रयोजनका लागि तयार गरिएको चरेस प्रहरीले फेला पारेपछि प्रहरीले रूममा विषेश अभियानको तयारी गरेको छ ।
‘रूममा चरेस बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको अनुमान गरेको छु,‘हामीले विषेश अभियानको तयारी गरेका छौ’ प्रहरी नायव उपरिक्षक बीर बहादुर बुढामगरले भने । उनका अनुसार रूममा इलाका प्रहरी कार्यालय दरवाङले समेत विषेश निगरानी गरिरहेका छ । गाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायलाई समेत लागुऔषधको हवको बन्न सक्ने भएकाले पनि सचेत बनाउने प्रयास भएको उनले बताए । ‘विदेशीले महंगोमा खरिद गर्ने भएकाले पनि केही ब्यक्तिले चरेस बनाउने गरेका छन्’ प्रनाउ बुढामगरले भने ।
उनले मेसिनको प्रयोग नभई हात र विभिन्न धातुको माध्यमबाट चरेस बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पोखरामा तस्करहरुले बिदेशी नागरिकका लागि चरेस बनाउने र त्यहाँबाट पठाउने गरेको तथ्य फेला पारेपछि प्रहरीले समेत नयाँ अनुहार भएकालाई निगरानीमा राखेको छ । रूममा अझैपनि चरेस बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको अनुमान छ । पक्राउ परेका नोक बहादुरबाट समेत थप तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा प्रहरी रहेकाले अभियान संगै संलग्नको पहिचान गरी पक्राउ गर्ने योजना प्रहरीको छ।
प्रहरी संगै जनप्रतिनिधिले समेत समेत लागुपर्दाथको ओसारपोसारले गाउँ नै बद्मान हुन लागेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नको पहिचान गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध गरेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले रुम सहित गाउँपालिका भित्र गाँजाका बोट नष्ट गर्ने गरी अभियान सञ्चालनका प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्ने बताए । उनले रुम सहित गाउँपालिका भित्रका हरेक वडामा रहेका टोलसुधार समिति, आमा समुह, यूवा क्लव, विद्यालयमा समेत सचेतनामुलक अभियान सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
जिल्लामा लाधुऔषध जिल्ला बाहिरबाट भित्रिने भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा गाँजा खेती गरी चरेस बनाउने गरिएको छ । रुम आसपासबाट म्याग्दीका साथै छिमेकी बागलुङ तर्फ समेत जाने गरेकाले पनि स्थानीयलाई सहयोगको अपिल प्रहरीले गरेको छ। एक केजी चरेसलाई विदेशीले ४० हजारसम्म दिने भएकाले पनि धन कमाउने प्रलोभनमा फसेकाले चरेसको बनाउने गरेको प्रहरीको भनाई छ । जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा गाँजालाई मिचेर कालो रंगको बनाउने गरिन्छ । लागुपर्दाथको कारोबारमा संलग्नलाई लागुऔषध मुद्धाका कडा सजायको ब्यवस्था रहेको छ । परिणाम हेरेर ५ बर्ष तथा जरिमाना समेत गर्ने गरिएको छ ।
Previous articleसवारी दुर्घटनामा घाईते भए गायक खड्ग गर्बुजा
Next articleगुठीकै जमिनमा बस्ती